Madhuwan Poudel | Nepali Stories
Madhuwan Paudel – Arkale Lekhi Diyeko Niyati
पासपोर्टमा उसको फोटो देख्नासाथ मेरा आँखा अगाडि मुरलीधरको अनुहार नाच्न थाल्छ विभिन्न मुद्रामा ! मैले तीन महिना अगाडि उसलाई भेट्दा बेग्लै विस्मात् र पीडा पढेको थिएँ उसको अनुहारमा । उसको कथा र व्यथा सुनेको जो कोहीले पनि मुरलीधरलाई सहानुभूतिका दर्ुइशब्द बोल्ने गरेको देखिन्थ्यो । मलाई भेट्नु अघि काउन्टरमा दर्ुइ-चारजनासँग र त्यसपछि मेरा सहयोगीसँग उसले आफ्नो वह पोखिसकेको थियो । “कति भयो यता आएको -” मैले उसलाई सोधेको थिएँ । “नौ महिना ।” नौ महिनाको प्रवासमा मुरलीधर स्याङ्जाको एउटा गाउँको फूर्तिलो लक्का जवानबाट यहाँको एउटा सानो फाउण्ड्रीको रक्स्याहा, अल्छी र अनुत्तरदायी हेल्पर बनिसकेको थियो । वरपरका छरछिमेकी र इष्टमित्र सबैलाई जे पर्दा पनि अगाडि देखिने र सबैको प्रियपात्र मुरलीलाई अहिले जसले पनि आफूभन्दा तीन हात पर उभिएरै जे भन्नुरपर्छ भनोस् भन्ने चाहन्थे । महिनौं ननुहाएजस्तो अनुहार मैले कपडा र जीर्ण शरीर तर तीखा शब्द बोल्ने मुरलीधर भएको थियो ऊ अहिले ।
आफ्नै मामाको छोराले अरबको सपना र बेग्लै संसारको बखान गरेको सुन्दा कति उत्साहित भएको थियो मुरलीधर ! “तिमीजस्तो फूर्तिलो मान्छे यसरी हल्लिएर बस्ने हो – तीनवर्षउता गयौ भने कहाँ पुग्छौँ कहाँ !” सपना बेच्ने पेशाको उसको मामाको छोरो अनि सपनामा आफूलाई डुबाउन खोजिरहेको मुरलीधरबीच देखिएको द्वन्द्व ! मुरलीधर आफ्नै गाउँ, आफ्नै संसारमा रमाइरहेको थियो । सानोतिनो मर्मतदेखि मेलापातसमेत भ्याएर ऊ सबैको प्रियपात्र भएको थियो । उसको सानो गाउँमा मात्र होइन, भञ्ज्याङपारि र वल्लोपल्लो गाउँमा समेत कसैको घरमा बत्ती निभ्यो अथवा कसैको औजारले काम गरेन भने सबै मुरलीधरलाई सम्झन्थे । मुरलीधर बिजुलीको फ्युज हाल्नेदेखि लिएर, कोदालीको पाइन लाउने, खर्ुपाको धार लाउने अनि हुँदाहुँदा कसैलाई परेका बेला बोकेर हेल्थपोस्ट पुर्‍याउने अथवा सदरमुकाम पुगेर वस्तुभाउको औषधि ल्याइदिने कामसमेत सबै गरिदिन्थ्यो । उसको आफ्नो भन्नु पनि को थियो र ! बूढो राँडो बाउ अनि पोइल गइसकेकी एउटी दिदी, जसलाई बाउले घरभित्र नहुलेकाले ऊ लुकीलुकी भेट्न जान्थ्यो र बेलाबेलामा नलीको मार खान्थ्यो । सबै काम जान्नुपर्ने उसका लागि साँच्चिकै बाध्यता पनि थियो । दूइजना प्राणीको भातभान्छा त के कुरा भो र – सानोतिनो खेतीको काम हेलैसँग सकेर ऊ अर्काको काम सघाउन पुग्थ्यो । डिलाघरका काकालाई औषधि थप्नुपर्‍यो कि उनलाई मुरली नै चाहिन्थ्यो, गाउँको पसले काजीलालको भरियालाई बाटो देखाउने काममा पनि मुरली अघि सथ्र्यो, अनि पुरेतको छोरो बिदामा आउँदा सदरमुकाम पुगेर राम्ररी बस चढाएर पठाउने जिम्मा पनि उसैले लिएको थियो । सधैं यस्तै विनासिती गोरु जोतिएझैँ जोतिएर, त्यसै बस्छस् – तेरो फर्ूर्ति र सीपले तँलाई काँबाट काँ पुर्‍याउँछ, थाहा छ तँलाई -”
मामाको छोराको रट !
“हाम्ले त्यत्रो पैसा काँबाटो ल्याउनु नि ठूल्दाइ -”
मुरलीधरको वेदना !
“धत्तेरी लाटा ! बाउलाई भन्ने नि ! त्यत्रो जग्गा जमिन छ, त्यसलाई राखेर अलिकति रिन लिने, तैँले दुइ वर्षै निखन्न सकिहाल्छस् !” पल्लो गाउँको उसको दौँतरीको बाबु सदरमुकामको बैंकमा आफ्नो छोराले पैसा पठाउँदा आफूलाई साथी लगेको सम्झन्छ मुरलीधर ! त्यही पैसाले उनले आफ्नो आधा खेत निखनेका थिए । तर बाँकी आधा अझै गाविसकै कब्जामा थियो ।
“केही पर्‍यो होला त बाबु ! पठाउँला नि फेरि !” बूढा निकै खुसी थिए र छोराले अर्को किस्ता पठाउँछ भन्ने कुरामा आशावादी थिए ।
मुरलीधर र मामाको छोरालाई झण्डै एक महिना लागेको थियो – उसको बाबुलाई चित्त बुझाउन ! मुरलीधरकै मुख हेरेर काजीलालले पैसा दिएको रे ! खेत वन्धकी परेको भन्दा पनि बाउलाई छोरो हिँड्न लागेकोमा बढ्ता पीर लागेको थियो । कुरा मुरलीले नबुझेको होइन । तर सपनाको संसार अनि त्यसको मृगतृष्णाले मुरलीले अरु केही सोचेन । सदरमुकाममा कागजपत्र बनाउने, पासपोर्ट, भिसा, टिकट, डलर साट्ने भन्दाभन्दै मामाको छोराले उसलाई लाख रुपियाँभन्दा बढीको रिनको भारी बोकाइसकेको थियो । हवाइजहाज चढ्ने दिनसम्म पनि मुरलीधरको व्यग्रता कम भएको थिएन । बरु बढ्दो थियो । “घरखेत, त राखियो, भोलि के हुने हो – कस्तो ठाउँ होला….” आदि-आदि चिन्ताले सताइरहन्थ्यो मुरलीधरलाई । बाउलाई पनि विधुवा काकीको हेरचाहमा छाड्नुपर्‍यो । हवाइजहाजभित्र चढेदेखि नै स-साना झोला बोकेर असङ्ख्य सपनाको मायावी संसारमा आफूजस्तै डुबिरहेका अरूलाई हेथ्र्यो मुरली ! अनि आफैँमा हराउँथ्यो । चार घण्टापछि ऊ अर्कै संसारमा आइपुगेको थियो । चौडा र राम्रा सडक, दिन र रात नछुट्टनिे गरी बलेको झलमल बिजुली, विशाल र गगनचुम्बी घर, ढकमक्क फूलेका फूल र हरियाली नाघ्दै त्यो दिन मुरलीधर र अरू नौजना गल्लीभित्रको लामो कोठामा पुगेका थिए । अनि ऊ छाँगाबाट खसेजस्तो भएको थियो । “लौ, अब तिमेरुको पासपोर्ट, ट्राभेलर्स चेक सबै मलाई देओ, भिसाको काम नसकी काम गर्न पाइन्न । दरुइचार दिन घुमघाम गर ।” मुरलीधर र अरूलाई ल्याउने दलाल त्यस दिन यति भनेर हिँडेको थियो । भोलिपल्ट बिहान सबैलाई ५०।५० स्थानीय मुद्रा थमाएर “लौ पल्लो सडकमा खाने ठाउँ छ, म तिमेरुको काममा लाग्छु । दरुइचार दिन आउन्न होला , न हड्बडाउनु” भन्दै ऊ हिँडेको थियो । ऊ र उसका नौ साथी केवल निन्याउरो मुख पार्न सक्थे । टाइ-सुटमा टिपिक्क परेर दामी ब्रिफकेस बोकेर त्यो यच. आर. एजेन्ट भनिने दलाल दरुइचार दिनमा देखा पर्ने गथ्र्यो अनि एक जनालाई लिएर जान्थ्यो । अनि एक दिन उसले मुरलीधरलाई सोध्यो – “ए भाइ ! तिमी फाउण्ड्रीमा काम गर्न जाने अब ! इरानी अर्बाब् -मालिक) छ, काम अलि गाह्रो भए पनि ओभरटाइम पनि भएकोले राम्रो हुन्छ ।” झण्डै एक महिना झयालखानाजस्तो ठाउँमा कोच्चिएर बस्दा मुरलीधर अर्ध विक्षिप्त भइसकेको थियो । कहाँ आफ्नो स्वेच्छामा सबैको हाई हाई बनेर डाँडापाखा दगुरिरहेको मुरली, कहाँ दर्ुबईको एउटा गल्लीमा भेडाबाख्राभन्दा पनि गए गुज्रिएको स्थितिमा कोच्चिएर बस्नुपरेको अहिलेको मुरली !
केही नसोची उसले भनेको थियो, “जान्छु ।”
दिन, हप्ता र महिना बिते – फाउण्ड्रीको मालिकले दिने जाउलो र छजना कोच्चिनुपर्ने सानो कोठा । तीन महिनापछि मुरलीको हातमा १५०० दिरहम परेको थियो । त्यसको केही दिनपछि अर्को ६०० दिरहम ओभरटाइम वापत ! मुरलीधरसँग केही कागज थिएन, केही निस्सा वा परिचयपत्रसमेत थिएन । एक दिन उसलाई फाउण्ड्रीमा लगाउने एजेन्टलाई उसले अकस्मात् बजारमा भेट्यो र कठालो समात्यो । अनि मात्र उसको हातमा आफ्नो पासपोर्टको फोटोकपी र फाउण्ड्रीमा काम गरेको कच्चा निस्सा हात परेको थियो । तिनै कागजात च्यापेर मुरली मकहाँ न्याय माग्न आएको थियो । उसलाई आफ्नो मामाको छोराको नामबाहेक अरु कसैको नाम, ठाम केही थाहा थिएन ।
फाउण्ड्रीको मालिक भन्थ्यो –
“मैले भिसा प्रोसेस गरिराखेको छु ।”
“यसले कामै गर्न छाडिसक्यो म आफ्नो पैसा नउठाइ यसलाई त्यसै कहाँ छाड्छु ! यसले आफ्नै इच्छाले कन्ट्राक्ट्मा सही गरेको छ ।”
मुरली भन्थ्यो –
“मलाई करबलले सही गरायो त्यो अर्बाबले ! केही कागज दिएको पनि छैन, टाइममा तलब पनि दिँदैन । मेरो सेक्रेटरी र उसको गलफती अनि मुरलीको एकोहोरो रर्टाई सुन्दासुन्दा म आजित भइसकेको थिएँ । आफूले गर्न सक्ने एउटै उपाय थियो – औपचारिक उजुरी ! उजुरीपत्रको प्रतिलिपि आफ्नो बर्ुर्सटको खल्तीमा घुसारेर हिँडेपछि मुरलीधर मकहाँ आएन । हामीले सम्झयौँ – मुरलीधर मामिला सल्टिएछ ! तर हिजो एक्कासि खबर आयो – एउटा नेपाली एक हप्ता अगाडि ट्रकले किचेर मरेछ !
आज उसको पासपोर्ट र अरू कागजात मेरो टेबुल अगाडि असरल्ल छन् । म एकपटक मुरली र एकपटक उसको बाबुलाई सम्झन्छु । मलाई लाग्छ – मुरलीको दुर्घटना र उसको मृत्यु कुनै दुर्घटना होइन, बरु एउटा नियति हो, त्यो पनि अर्काले लेखिदिएको ! विधिको विडम्बना, अनि अनेकौं मुरलीधरहरूको एउटा व्यथा । आफ्नो माटो, आफ्नो गाउँ, आफ्नो देशभन्दा धेरै टाढा विदेशमा । म र मजस्ताले सुन्न र देख्न सक्ने तर निदान गर्न नसक्ने !
Posted in Madhuwan Poudel
Tagged Literary work of Nepali Story Writer Madhuwan Paudel Literatures of Nepali Story Writer Madhuwan Paudel Madhuwan Paudel - Arkale Lekhi Diyeko Niyati Madhuwan Paudel's Nepali Story Arkale Lekhi Diyeko Niyati Nepali Author Madhuwan Paudel Nepali Katha Nepali Katha Arkale Lekhi Diyeko Niyati by Madhuwan Paudel Nepali Kathakar Nepali Kathakar Madhuwan Paudel Nepali Rachanakar Kathakar Madhuwan Paudel Nepali Sahitya Nepali Sahityakar Nepali Stories Nepali Stories By Madhuwan Paudel Nepali Stories Collection Nepali Stories Collection Of Madhuwan Paudel Nepali Story Nepali Story Arkale Lekhi Diyeko Niyati by Madhuwan Paudel Nepali Story Blog Nepali Story Website Nepali Story Writer Nepali Story Writer Madhuwan Paudel Sahityakar Madhuwan Paudel Ka Nepali Katha Haru